ဟမ်ဘာဂါ | Wutyee Food House
« Thousand Island Dressing
January 20, 2010 by chowutyee
၀တ်ရည်မနေ့က ဟမ်ဘာဂါလုပ်စားတာနဲ့ တင်ဖြစ်သွားတာ… ၀တ်ရည်ကတော့ ဟမ်ဘာဂါကြိုက်သူဖြစ်လို့ ပျော်ပွဲစားသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုစုံရင် လုပ်စားလေ့ရှိတယ်။ ဟမ်ဘာဂါကို အစားပြေအနေနဲ့ အနောက်နိုင်ငံ အများစုမှာ စားသုံးလေ့ရှိပါသည်။ ဟမ်ဘာဂါသည် လုပ်စားရလွယ်ကူပြီး အချိန်တိုအတွင်း လုပ်စားနိုင်ပါသည်။
ဟမ်ဘာဂါတွင် ပါဝင်သည့် အသားပြားကို အရင် ပြုလုပ်ပါ။
၁။ ကြက်သာဲး(သို့) ၀က်သား- ၇ကျပ်သား (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၂။ ပါမုန့် – ၁ချပ် (အတုံးလေးများတုံးပါ)
၃။ ကြက်ဥ – ၁လုံး (ခလောက်ထားပါ)
၅။ ဂျုံမှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
၆။ ဆား – လက်ဖက်၇ည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ရ။ ကြက်သွန်နီ – တ၀က် (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
ရ။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၂မွှာ (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၁။ အသားပြားတွင် ပါဝင်သောပစ္စည်းအားလုံးကို ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ၂လက်မ အရွယ်လောက် အသားအ၀ိုင်းပြား ၂ပြားလုပ်လိုက်ပါ။
၃။ ဒယ်ထဲ ဆီ (စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း) ထည့်ပြီး အသားပြားများကို အညှိရောင်သန်းလာသည် အထိ ကြော်ပေးပါ။
၁။ ဟမ်ဘာဂါ ပါမုန့် – ၂လုံး
၂။ ခရမ်းချဉ်သီး – ၁လုံး (အ၀ိုင်းလှီးပါ)
၃။ သခွားသီး – တစ်ခြမ်း (အ၀ိုင်းလှီးပါ)
၄။ ချိစ် – ၁ချပ်
၅။ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၆။ မရိုနိစ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၇။ ဆလတ်ရွက် – ၁စည်း ( တ၀က်ဝက်ပါ )
၈။ ထောပတ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၉။ အသားပြား (ကြက် (သို့) ၀က်)
၁။ ဟမ်ဘာဂါ ၂လုံးရဲ့ ပါမုန့် မျက်နှာပြင်တစ်ဘက်တချက်ကို ထောပတ်များသုတ်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဒယ်ပြားထည့် ပါမုန့် မျက်နှာပြင် အညှိရောင် အနည်းငယ်သန်းလာသည် အထိ ကြော်ပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် ပါမုန့် ၂လုံး တဘက်တချက်ကို မရိုနိစ်များ သုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် (ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွာသီး၊ ချိစ်၊ဆလတ်ရွက်၊ အသားပြား ) များကို အစဉ်လိုက်ထည့်ပေးပါ။
၅။ အသားပြားပေါ်မှ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ကို ဖြူးပေးပါ။
၆။ အသင့်စားနိုင်သော ဟမ်ဘာဂါကို ရရှီပါပြီး။ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ ၊ အားလူးကြော်၊ ကိုကာကိုလာ များဖြင့် တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါသသည်။
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း |7Comments
on January 20, 2010 at 9:46 am | Reply Hmone Gyi
it look really decilious…only i can do professional is also burger as i used to work at burger king around 10 months 😉 but i don’t like burger too much as they are quite expensive rather than KFC…so i chose KFT rather than burger foods mostly 🙂
on January 20, 2010 at 10:23 am | Reply chowutyee
ဟမ်ဘာဂါဝယ်ကို ကိုယ်မှာကို လုပ်စားပေါ့ မှုံကြီးရဲ့….
on January 21, 2010 at 10:48 am Hmone Gyi
pyin loe heee 😛
on January 20, 2010 at 12:50 pm | Reply leo
ဟမ်ဘာဂါ စားသွားပါတယ်း)
on January 25, 2010 at 1:55 pm | Reply chowutyee
on December 14, 2010 at 2:02 am | Reply ko nyein
which bread use in meat slice? white bread or not?thanks.
on December 17, 2010 at 5:30 am | Reply chowutyee
Ko Nyein ရေ ဟမ်ဘာဂါ ပါမုန့်က သီးသန့် ရောင်းပါတယ်… ပြီမှ အလယ်က တ၀က်ဝက်လိုက်ရုံပါပဲ.. white bread ပါပဲ.. 😀